ကြမ်းခင်းကြွေပြားများကိုမည်သို့သန့်ရှင်းရမလဲလည်းတောက်ပနေပါသည်။ နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးအကြံဥာဏ်များ - ZD ကြမ်းပြင်ကျွမ်းကျင်သူ
နေအိမ် > ကြမ်းခင်းကြွေပြားများကိုမည်သို့သန့်ရှင်းရမလဲလည်းတောက်ပနေပါသည်။ နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးအကြံဥာဏ်များ
၁။ ကြမ်းခင်းကြွေပြားများပိုမိုသန့်ရှင်းစေရန်မည်သို့သန့်ရှင်းရမည်နည်း။ ပထမ ဦး စွာပိုးမွှားသန့်စင်ရန်ကိရိယာများကိုပြင်ဆင်ပါ။ အရေးကြီးဆုံးမှာကြမ်းခင်းပေါ်ရှိအစွန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောရေမြှုပ်များ၊ ရေဘူးများ၊ သန့်ရှင်းရေးကိရိယာများနှင့်သန့်ရှင်းရေးကိရိယာများရှိသည်။
၂။ မြေတိမ်ခြင်းမပြုမီ ဦး စွာရေလောင်းနိုင်သည့်ရေကိုဖြည့်စွက်။ ကြမ်းခင်းကြမ်းခင်းပေါ်တွင်အလွှာကြီးကိုညီမျှစွာဖြန်းပါ။ ရေဖြန်းပြီးနောက်ရေမြှုပ်ကိုသတ္တဝါအားလုံးကိုဆေးကြောပါ၊ ရေကြမ်းတိုက်မှရေကိုညှစ်ပါ။ ပြီးလျှင်ကြမ်းပြင်ကြမ်းပြင်ပေါ်ရှိကြမ်းပြင်ကိုရေဖြန်းပါ။ မြေကြီးသည်ရေနှင့်ဖြန်းထားသောကြောင့်မြေကြီးကိုဆွဲယူရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်၊ ဒါကြောင့်ဆွဲယူခံရပြီးနောက်မကြာမီတွင်ရေသည်ကြမ်းပြင်ပေါ်စိမ်နေသဖြင့်မြေပြင်ပေါ်ရှိသန့်ရှင်းသောအရာများကိုဖယ်ရှားရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။
၃။ အထူးအစွန်းအထင်းများအတွက်အထူးသန့်ရှင်းဆေးအချို့ကိုဖြန်း။ ၅ မိနစ်ခန့်ခံရပ်ပါ။ ထို့နောက်အစွန်းအထင်းများကိုပွတ်တိုက်ရန်အနည်းငယ်ပျော့ပျောင်းသောပိတ်ကျဲစ (towel) သို့မဟုတ် brush ကိုသုံးပါ။ မည်သည့်ပိုးသတ်ဆေးကိုရွေးချယ်ရမည်ဆိုပါကအုတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအစွန်းအထင်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပါသည်။ အထက်ပါအခြေအနေများအရသင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
4. အစွန်းအထင်းများကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာဖယ်ရှားပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဆွဲထုတ်ပြီးနောက်ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်သည်အတော်အတန်သန့်ရှင်းလိမ့်မည်။ ဤအချိန်တွင်ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်၏ခေါင်းပေါ်ရှိသန့်ရှင်းသောအရာများကိုဆေးကြောပြီးလျှင်ညှစ်ထုတ်သင့်သည်။ လူတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးချက်တစ်ခုရှိသည်။ သင်၏အိမ်တွင်အဝတ်လျှော်ခန်းတစ်လုံးရှိပါက၎င်းကိုအင်တုံကြီးတစ်ခုထဲသို့ထည့်ပြီးရေထည့်နိုင်သည်။ သို့မှသာသင်သည်စုတ်တံကိုစုပ်ယူနိုင်သည်။ ဘုတ်ပေါ်မှရှေ့သို့နောက်သို့ပွတ်ဆွဲပါ။ ရေမြှုပ်၏ ဦး ခေါင်းသည်မကြာမီသန့်ရှင်းသွားလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်လွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေသည်။
၅။ ကြမ်းတိုက်အဝတ်လျှော်သန့်ရှင်းပြီးနောက်ရေကိုခြောက်သွေ့စေရန်ရေမြှုပ်ကိုညှစ်ပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက်မြေကြီးပေါ်သို့လျင်မြန်စွာလမ်းလျှောက်ပါကမလိုအပ်သောရေကိုစုပ်ယူလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်ကလည်းပိုးသန့်ဆေးထားပါ, အကျိုးသက်ရောက်မှုအလွန်ဆိုးရွားပါလိမ့်မည်!
ကြမ်းခင်းကြွေပြားများကိုမည်သို့သန့်ရှင်းရမလဲလည်းတောက်ပနေပါသည်။ နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးအကြံဥာဏ်များ ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ